Inhlama for ophaya ethosiwe: iresiphi elula
Yenza inhlama for ophaya ethosiwe bebodwa - akusiwona nje nice (ukwenza okuthile ngezandla zabo njalo omkhulu!), Kodwa futhi nangokonga. Ukudukiswa ubisi, nakuba amanzi kufanelekile, iqanda elilodwa owengeziwe (futhi lapho namanje wenze omelet ?! efanayo), Ucezu ibhotela - konke iya imbangela. Kulokhu, udinga ukuthenga kuphela imvubelo nofulawa (iphakethe kg). Kodwa uwayehlalise othanda ukupheka futhi mikhiqizo njalo.
Olinganise izithako: 1 egg, 1.3 izinkomishi ubisi, 50 g le-bhotela, imvubelo noma okusheshayo iphakethe 30 g ezomile, 3.5 izinkomishi kafulawa.
Into eyinhloko ukuba inhlama kwesokudla. Uma wenza kanjalo-ke okokuqala - ke ngeke ngikwazi ukuvuka ngaso sonke. Uma une eningi amehlo ukubukela, elinde, lapho ubonisa "ikilasi" - okufanayo ngeke kwenzeke. Ukupheka ukusho akukho, kuyafana kumele kwenziwe nge umphefumulo.
BATSHALE inhlama for ophaya ethosiwe kufanele kube njalo.
Asiqale ngemvubelo. Ezitolo zokudla, eside bekulokhu okubizwa ngokuthi "kuyashesha-othatha isinyathelo 'nemvubelo. Akufanele pre-buhlanjululwe ngamanzi ukulungiselela for ukuvutshelwa inhlama. Nokho, okuhlangenwe nakho kuye kwabonisa ukuthi uma nje engeza ukuze ufulawa njengoba kulotshiwe imiyalo iphakethe, yakho imvubelo inhlama ngeke bavuke. Iziqondiso nazo kuboniswe olinganise kafulawa nemvubelo, nabo zehluke ngezabelo ku zokupheka athandwayo. Gxila lokhu: isigamu iphakethe imvubelo (iphakethe 11 amagremu), 3.5 izinkomishi kafulawa (nje ngokwanele futhi sidinga ukuhlola).
Ngakho, buhlanjululwe 5 g isivinini imvubelo (30 c imvubelo abavamile) e esincane amanzi afudumele (noma kunjalo, hhayi ashisayo futhi athathe izinyathelo, akuyona abandayo, kancane kunakwezinye Igumbi lokushisa). Uma usebenzisa imvubelo ezivamile - ungeze kule isixazululo kwengcosana kashukela (isipuni). Govuza.
Kuze imvubelo cwilisa emanzini epanini elikhulu uthele ufulawa - 3.5 izinkomishi (kusuka iphawundi iphakethe into izohlala, kodwa lemali edingekile ngaphezulu ufulawa).
Eceleni uhlanganise iqanda, usawoti (isigamu isipuni) kanye nobisi (iyatholakala ikani omuncu amanzi plain) e isamba 1 inkomishi futhi namanje ikota inkomishi. Thela inhlanganisela ku ufulawa, engeza ukuba pan ne ufulawa imvubelo ingxube bese uxove ngokushesha. Inhlama for ophaya ethosiwe uthole Friend, kodwa sahlala eyodwa ngaphezulu isithako - ibhotela.
50 g le-bhotela (owesine kwesigaba 200 igramu iphakethe) ancibilike epanini. Phela, in the ezitolo ithengiswe ibhotela kakade elicibilikile, kuba eshibhile futhi ngokuphelele efanelekayo nalolu vivinyo. Qiniseka kuphole ke! Kungenjalo inhlama nje kuphekwe. Kuze uwoyela epholisa, ivuse inhlama.
Engeza ugovuze imizuzu emihlanu ngaphezulu inhlama bhotela.
Inhlama angasuswa endaweni efudumele, embozwe pan ithawula. Ungalwembozi, hhayi okunye, ngoba uma kungenjalo phezulu inhlama Uqinisa, kubalulekile ukuba Dabula koqweqwe.
Ngemva kwehora, inhlama likhuphuka, kubalulekile ukuba donsa aphume kuso, bahlanganise izandla zakho, ngaphambili efafazwe itafula ufulawa. Beka emuva enye amahora 1-1.5. The eside inhlama for ophaya (ethosiwe) abakwazi ukuyigcina! Kuyoba ukuthola ukunambitheka imvubelo isibilile namaqebelengwane kukhona kunganambitheki ngokuphelele.
Zonke amalungiselelo usuqedile, ekugcineni inhlama ilungele ophaya ethosiwe. Recipe, njengoba kuchaziwe lapha, kantsi sicuketse loku izithako eziyisisekelo imvubelo inhlama, kodwa ezinye zazo kungashintshwa ngesikhathi esifanayo (amasi ngoba kefir, isibonelo), futhi ungashintsha inani izithako. Inhlama ethosiwe for ophaya lizwakale kangcono uma ufake kuyo amaqanda ngaphezulu (2-3). Uma esikhundleni ubisi ukuthatha ukhilimu for nomkhombe ibhotela akudingekile neze, futhi kudingeka ufulawa kancane (2 izinkomishi). Kodwa ucwaningo ezifana kufanele sibeke kuphela emva master le iresiphi elula.
Uma wenze konke Ngakwesokudla, kusuka phezulu epanini phansi egcwele inhlama. Ngaphambi akhombe inhlama ophaya khumbula kahle. Le mali kwanele ukuze uthole iphawundi toppings. Futhi lokho Izinto - thatha ipiki. amakhekhe ethosiwe kungenziwa kuphekwe inyama nezithelo, noshizi, ngokuvamile, ngalutho!
Pollack ithoswe yathamba ne izaqathe kanye anyanisi: ikakhulukazi ukupheka, izindlela kanye nokubuyekeza
Cocktails Hawaiian: zokupheka, amasu ukupheka, Ukwakheka
Amazambane Dauphine. izitsha UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki ngezithako elula
Amu Darya River - Umthambo amanzi amahlanu uthi
Yini amatshe ukulingana Aquarius-abesifazane? Ukuhlobisa ngesikhathi sokuzalwa komuntu
Ukufaka Nvidia abashayeli Nouveau Ukuze Riva TNT On Ubuntu
Umuthi 'Dioflan ": yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa. Gel "Dioflan"